GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Russian Sign Language Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
Ị̀ na-eru uju nne gị ma ọ bụ nna gị nwụrụnụ? Ọ bụrụ otú ahụ, olee ihe ga-enyere gị aka idi ya? Gụọ isiokwu a ka ị hụ otú Baịbụl si nyere ndị na-eto eto atọ aka idi ọnwụ nne ha ma ọ bụ nna ha.
Isi bidoro wawa papa m. Ma, ọ bịara na-aka njọ nke mere ka mama m kpọọ ndị ụlọ ọgwụ ka ha jiri ụgbọala ha bịa buru ya. M ka na-echeta mgbe ahụ ha bu ya na-apụ. Amaghị m na ihe ahụ bụ nke ikpeazụ m ga-ahụ ya. Mgbe abalị atọ gachara, ọrịa ụbụrụ gburu papa m. Adị m naanị afọ isii mgbe ahụ.
Kemgbe ọtụtụ afọ, m nọ na-ata onwe m ụta maka ọnwụ papa m. Mgbe ụfọdụ, m cheta mgbe ahụ e bu ya na-apụ, mụ ajụọ onwe m, sị: ‘Gịnị mere m ji guzoro ebe ahụ, n’emeghị ihe ọ bụla?’ Mgbe ụfọdụ, m hụ ndị agadi na-arịa ọrịa, mụ ana-ajụ onwe m, ‘Gịnị mere papa m ji nwụọ, mana, ndị a ka nọcha ndụ?’ Ka oge na-aga, mama m nyeere m aka ịkwụsị izochi ihe dị m n’obi. Ndịàmà Jehova ibe anyị nyekwaara m aka.
Ụfọdụ ndị na-eche na ihe mee mmadụ, onye ahụ nwere ike iru uju ya ozugbo ma chefuo ya. Ma, ọ dịghị otú ahụ n’ebe mụnwa nọ, n’ihi na ọ bụ mgbe m dị ihe dị ka afọ iri na anọ ka m bidoro ruwa nke bụ́ uju.
Ihe m na-agwa ndị na-eto eto nne ha ma ọ bụ nna ha nwụrụ bụ: “Kọọrọ onye ọzọ otú obi dị gị. Ọ bụrụ na ị kọọrọ mmadụ otú obi dị gị n’egbughị oge, o nwere ike ime ka i nweta onwe gị ngwa ngwa.”
N’eziokwu, ọ na-ewute m na papa m anọghịzi ya ka ọtụtụ ihe na-eme ná ndụ m. Ma, ihe e dere ná Mkpughe 21:4 kasiri m obi. Ebe ahụ sịrị na Chineke “ga-ehichapụkwa anya mmiri niile n’anya ha, ọnwụ agaghị adị ọzọ, iru uju ma ọ bụ mkpu ákwá ma ọ bụ ihe mgbu agaghịkwa adị ọzọ.”
Ihe ụfọdụ m na-echeta gbasara papa m bụ oge ndị mụ na ya na-eso aga egbu azụ̀ na oge ndị anyị na-aga atụrụ ndụ n’ugwu. Ọ na-enwe mmasị ịga n’ugwu.
O nwere mgbe ọrịa obi nyetụrụ ya nsogbu. Echetara m otu ugbo ma ọ bụ ugbo abụọ m gara leta ya n’ụlọ ọgwụ mgbe m ka dị obere. Ma, amaghị m na ọrịa ya ahụ abụghị obere ọrịa. O mechara nwụọ n’ọrịa ahụ mgbe m dị afọ itoolu.
Asị m ka m begbuo onwe m n’ákwá mgbe ahụ. Ákwá m bere mere ka m nọrọ n’oké mwute, o nweghịkwa onye m chọrọ ikwusara okwu. Obi ajọtụbeghị m njọ otú a mbụ. Ike ihe niile gwụrụ m. Òtù ndị na-eto eto m nọ na ya na chọọchị anyị nyetụụrụ m aka ná mbido, ma mechaa gbahapụ m. Ha nọ na-agwa m okwu ndị dị ka, “Oge papa gị ezuola” ma ọ bụ, “Chineke akpọrọla ya” ma ọ bụkwanụ, “Ọ nọ n’eluigwe ugbu a.” Ihe ndị ahụ ha nọ na-agwa m ejughị m afọ. Ma, amaghị m ihe Baịbụl kwuru gbasara ọnọdụ ndị nwụrụ anwụ.
Mama m na Ndịàmà Jehova mechara bido mụwa Baịbụl. Mụ na nwanne m nwoke mechakwara soro ha mụwa Baịbụl. Anyị matara ihe bụ́ ọnọdụ ndị nwụrụ anwụ, matakwa na Chineke kwere nkwa na ọ ga-akpọlite ndị nwụrụ anwụ. (Jọn 5:28, 29) Ma, amaokwu Baịbụl kacha nyere m aka bụ Aịzaya 41:10, ebe Chineke sịrị: “Atụla egwu, n’ihi na m nọnyeere gị. Elegharịla anya n’ụjọ, n’ihi na abụ m Chineke gị. M ga-eme ka ị dị ike. M ga-enyere gị aka.” Mmata m matara na Jehova nọnyeere m kasiri m obi mgbe ahụ, ka na-akasikwa m ruo taa.
Mgbe m dị afọ asaa, ọrịa kansa gburu mama m. Ụbọchị ahụ ọ nwụrụ, ọ dị m ka ọ̀ bụ ná nrọ. Echetara m na ọ nwụrụ n’ụlọ, mama nnukwu m na papa nnukwu m nọkwa ya mgbe o mere. O mere ka ebe niile daa jii. Echetakwara m na ihe anyị riri lakpuo n’anyasị ụbọchị ahụ bụ àkwá e ghere eghe. Ọ dị m ka ụwa m ò ji nwayọọ nwayọọ na-achọ ịghasasị.
Ma mgbe ahụ, ma mgbe afọ anọ gafechara, m weere ya na m kwesịrị ịgbalị kata obi ma lekọtawa nwanne m nwaanyị nke nta. N’ihi ya, m zochiri mwute m nọ na-enwe. Ruokwa taa, ihe mee m, m ka na-emekwa ka à ga-asị na ihe ahụ anaghị ewute m. Ime otú ahụ adịkwanụghị mma.
M ka na-echeta otú Ndịàmà Jehova nọ n’obodo anyị si nyere anyị aka mgbe ahụ. N’agbanyeghị na o tebeghị anyị bidoro ịga ọmụmụ ihe ha, ha kpasịrị anyị àgwà ka anyị na ha ọ̀ matala kemgbe ọtụtụ afọ. Echeghị m na papa m siiri anyị nri abalị ruo otu afọ n’ihi na ụmụnna na-ebutere anyị nri mgbe ọ bụla.
O nwere otu ebe m na-anaghị echefu echefu na Baịbụl. Ọ bụ n’Abụ Ọma 25:16, 17. N’ebe ahụ, Devid rịọrọ Chineke, sị: “Chee ihu n’ebe m nọ, meere m amara; n’ihi na anọ m naanị m, anọkwa m n’ahụhụ. Ihe na-enye m nsogbu n’obi adịwo ọtụtụ; mee ka m si ná nsogbu m nọ na ya pụta.” Ịmata na Jehova nọnyeere m mgbe m nọ ná mwute kasiri m obi. Baịbụl enyerela m aka ịkwụsị ịna-echegbu onwe m ma tinye uche m n’ihe ndị ga-eme ka obi na-adị m mma, dị ka olileanya mbilite n’ọnwụ. Enwere m olileanya ịhụ mama m ọzọ mgbe ahụ́ ga-esi ya ike n’ime paradaịs.—2 Pita 3:13.
Ị̀ ga-achọ ịmatakwu banyere ihe ndị ọzọ Baịbụl kwuru ga-akasi ndị na-eru uju obi? Danloduo akwụkwọ aha ya bụ “Mgbe Onye Ị Hụrụ n’Anya Nwụrụ.” Ị ga-ahụ ya na www.jw.org/ig. Pịa ebe e dere IHE NDỊ ANYỊ NWERE pịzie AKWỤKWỌ NA BROSHỌ.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Mgbe Ụmụaka Na-eru Uju Nne Ha ma Ọ Bụ Nna Ha